Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Airlines » Iinqwelomoya ezininzi ezithe ngqo phakathi kwe-US kunye ne-China zinqunyanyisiwe
Ukubhabha ngenqwelomoya ngokuthe ngqo phakathi kwe-United States kunye neTshayina iba yingxaki enkulu, kwaye i-COVID iyodwa ayisosizathu sodwa.
Urhulumente wase-US ubhengeze namhlanje ukunqunyanyiswa kweenqwelomoya ezingama-44 yi-Chinese Airlines phakathi kwala mazwe mabini.
Le ibiyimpendulo kwinyathelo elifanayo leziphathamandla zaseTshayina ezinqumamisa abathwali base-US ukuba baqhubeke nokubhabha. Isizathu sokuba iTshayina ibe kukuqhambuka kwe-COVID-19 eUnited States.
I-China Southern Airlines kunye ne-Southern Eastern Airlines nazo zichaphazelekayo.
Abasemagunyeni baseTshayina banqumamise iinqwelomoya ezingama-20 ze-United Airlines, iinqwelomoya ezili-10 zaseMelika, kunye neenqwelomoya ezili-14 zeDelta Air Lines emva kokuba abanye abakhweli bevavanywe ukuba banayo i-COVID-19. Kutshanje ngoLwesibini, iSebe lezoThutho liqaphele ukuba urhulumente wase-China ubhengeze ukucinywa kwenqwelomoya entsha yase-US.
U-Liu Pengyu, isithethi se-Ambassy yaseTshayina eWashington, uxelele iReuters, umgaqo-nkqubo weenqwelomoya zabakhweli bamazwe ngamazwe abangena eTshayina "usetyenziswe ngokulinganayo kwiinqwelomoya zaseTshayina nakwilizwe langaphandle ngendlela efanelekileyo, evulekileyo necacileyo. Kwangelo xesha, i-ambassy yagxeka intshukumo yase-US ngokuchasene neenqwelomoya zaseTshayina njengengenangqiqo.
I-Airlines yaseMelika ixhase ukunqunyanyiswa ngurhulumente wase-US ukuqinisekisa impatho efanelekileyo yeenqwelo moya zase-US kwimarike yaseTshayina.
ISebe lezoThutho lathi iFransi kunye neJamani zithathe inyathelo elifanayo ngokuchasene ne-Chinas COVID-19 amanyathelo. Ithe ukunqunyanyiswa kwe-China kwiinqwelomoya ezingama-44 "kuyawuchasa umdla woluntu kwaye kugunyazisa ulungiso olulinganayo."
Yongeze ukuba "izenzo zeTshayina ezichasene nabathwali baseMelika ababiziweyo azihambelani" nesivumelwano samazwe amabini.
Oku ngakumbi: iTshayina | Fransi | Covid-19 | Xiamen | Jemani | Delta Air Lines
Amazwe aphezulu ehlabathi anezona meko zintle zokusebenza Fransi , Jemani |
iTshayina Covid-19 Delta Air Lines Fransi Jemani Xiamen
URihanna eBarbados kunye neBump yakhe yomntwana kunye neBikini
Ukubaleka kwePasika kwihotele yobuGcisa eBarcelona: kwiMeditera...
Iziphumo ezitsha zibonisa ukuhanjiswa kweendlela zomoya eziphezulu kunciphisa...
Amazwe akuMbindi Mpuma agxile kukhenketho oluzinzileyo...
I-SAUDIA: Amava amatsha okuntywila kuHambo lwaseArabia...
Uhlalutyo olunzulu lweMakethi yeZixhobo ze-Electromyography...